Herinandro efatra arivo: Fotoana sy ny fomba fampiasana azy avy amin'i Oliver Burkeman - Review | Boky filozofia - Bokin'izao tontolo izao
Herinandro efatra arivo: Fotoana sy ny fomba fampiasana azy avy amin'i Oliver Burkeman - Review | Boky filozofia
5 Oktobra, 2021 Aogositra 16, 2021 ny worldbook
Aiza no hividianana ny lahatsoratra Herinandro efatra arivo: fotoana sy fomba fampiasana azy avy amin'i Oliver Burkeman?
Herinandro efatra arivo: Raiso ny fetranao. Ovay ny fiainanao.
Ao amin'ny fiainan'ny olombelona salantsalany miharihary, mahazo isika 4.000 isan'andro amin'ny herinandro: Sabotsy 4.000 ho an'ny tsy fahatapahan-kevitra, Alahady kamo 4.000, alatsinainy maraina 4.000. Raha mbola tanora isika dia mety ho toy ny isan'ny rahampitso mandrebireby. Amin'ny fandalovan'ny loharano, tsy dia be loatra. Ny fanadihadian'i Oliver Burkeman momba ny fomba mety hiatrehantsika ny fomba manan-danja indrindra amin'izao andro izao dia mipetraka tsara eo anelanelan'ny ohatra azo ampiharina momba ny fanampiana tena sy ny fikatsahana filozofika. Mpanoratra monina ao amin'ny worldbook ho an'ny "Mitadiava Hafaliana" mandritra ny fotoana fohy, ny fitazonana ny fampanantenana isan-kerinandro hoe "Hanova ny fiainanao ity tsanganana ity" dia kely toy ny fitandremana nanangonany.
Manomboka amin'ny fampitandremana vitsivitsy ilaina izany. Tsy ho avy mihitsy ny andro nafoanao ny boaty fidiranao. Hisy fitakiana be dia be foana amin'ny fotoananao, na lavitra be. Na inona na inona mety hitranga ao anatin'ny antsasak'adiny manaraka. Ny fahatsiarovan-tenan'i Burkeman manokana, araka ny voalaza tamin'ireo loharano vao haingana, dia mety ho akaiky.
Nanomboka teo amin'ny fiainan'ny olon-dehibe izy, nieritreritra fa mety hisy tetika hanamafisana ny famokarana manokana. Izy dia mpanao planina, mpanao lisitra, mpividy fanasongadinana. Tena resy lahatra aho fa afaka manana fahazarana matanjaka telo, fito, na roa ambin'ny folo izay hahatonga anao hahatsapa ho voafehy amin'ny farany.
Tsikelikely, satria tsy nandeha araka ny nokasaina mihitsy ny drafitra, nisy ny fanapahan-kevitra noraisina, ary tonga ny ankizy, dia tsapany fa amin'ny fiainana mahaliana rehetra, dia tsy ho azy mihitsy ny fotoana 'mandaniana' amin'ny fomba mahomby, ary ny ankamaroan'ny tsiambaratelo dia mipetraka amin'ny fandraisana izany zava-misy izany.
Hevitra momba ny fotoana
Rehefa mandehandeha manodidina ireo fahamarinana ireo ianao dia manolotra tantara fohy momba ny hevitr'olombelona momba ny fotoana i Burkeman. Ny famaritana fantatsika tsara indrindra amin'ireo zavatra mety mitaky taratasy maika dia vokatry ny zavatra roa: ny fahalemena mahatohitra ny finoana eo amin'ny fiainana aorian'ny famonoana ary ny revolisiona indostrialy. Ny fandraisantsika ny fotoana voafetra, ny zava-drehetra misy, dia nifanojo tamin'ny fanondroana. Nahatonga ny fotoana ho maimaika sy sarobidy kokoa izany. Ny ankabeazan'ny fanahiantsika, araka ny voalazan'i Burkeman, dia avy amin'ny hoe "ny fotoana rehetra amin'ny fiainantsika dia mandalo amin'ny antsoin'i Heidegger hoe finitude", na noho ny fahatsapana mikorontana fa mety handany ny fotoana kely ananantsika isika.
Iray amin'ireo mahery fo amin'ity olana ity ilay miraikitra, izay afaka mangalatra tolakandro tsy misy antony
Amin'ny fandinihana akaiky kokoa ny mety ho dikan'izany, dia mbola manolotra paikady na eritreritra hanoherana izany tebiteby izany izy. Mazàna manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fifantohana ny habetsaky ny fivarotam-boky mahazatra ao amin'ny seranam-piaramanidina misy ny antontan-taratasy momba ny toetrandro. Ireo ahiahy ireo dia fantatra fa vao mainka niharatsy noho ilay mpamily lehibe amin'ny fanelingelenana nomerika. Ny orinasa media sosialy dia mahazo vola an'arivony tapitrisa manomboka amin'ny fotoana hanomezanao azy ireo tsy misy tanjona, mampiankin-doha, "mahatonga anao hanahy momba ny zavatra tsy tianao hanahirana", araka ny filazan'i Burkeman azy.
Ny mety kokoa, hoy izy, dia manampy ny mahatakatra ny fetran'ny olombelona fototra sasany. Voatery ny fanemorana, na dia azontsika atao aza ny tsy miraharaha ny zavatra tsara. Fomo, ny tahotra ny ho very kely, dia mahakivy ihany raha tsy tsapanao fa ny "very kely dia voaaro amin'ny fototra" eo amin'ny fiainana, vokatra an-tery avy amin'ny lalana tiany mihoatra ny iray hafa.
Mety hilaza amintsika ny mpampianatra mpanampy tena mba tsy "hipetraka" amin'ny fifandraisana na asa. Burkeman, etsy ankilany, dia milaza fa "tokony hilamina tanteraka izany, na ny marimarina kokoa, tsy manana safidy hafa izy.". Voatery ianao hahatsapa fa ny mpiara-miasa na asa tianao dia tsy ny mpiara-miasa na asa hafa rehetra. Ny hafaliana dia tarehimarika amin'ny zavatra ataonao amin'ity fampahalalana ity.
Ny famokarana dia mbola voaporofo fa toetra maoderina mampiahiahy. "Ny teny latinina ho an'ny raharaham-barotra, fifampiraharahana, dia nadika ho tsy fialam-boly, maneho ny hevitra fa ny asa dia fialana amin'ny tsiro ambony."
Raha manao fialam-boly hafa ho fanatsarana ny tena isika, dia sorona ny ankehitriny ho fanajana ny hoavy eritreretina. Iray amin'ireo mahery fo amin'ity olana ity ilay mifatotra, izay afaka mangalatra tolakandro tsy misy antony; ny iray hafa dia ilay "tia manana olana", mahafantatra fa ny toetry ny tsy manana olana dia tsy tonga amin'ny necroscopy. Burkeman dia mamarana ny oriny, ary ny mpamoaka azy. - Manizingizina, ho an'ny toro-hevitra 10 tokony hotsaroana. Tsy misy fanakanana, tsy izany. Ilaina, toy ny amin'ny fikatsahana tsara indrindra rehetra, ny fahafinaretany maro dia tsy mitaky tsimokaretina haingana, fa mitranga eny an-dalana.
Efatra Arivo Herinandron'i Oliver Burkeman: Fotoana sy fomba fampiasana azy dia lahatsoratra Bodley Head (£ 16.99). Mba hanohanana ny Guardian sy Observer, mangataha ny kopiao ao amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pamoahana
Sokajy Vaovao farany Tags Burkeman, Ahoana no, efatra, filozofia, boky, Mil, Oliver, ny, famerenana, herinandro, fotoana, mampiasa azy Ticket navigation
Samar Yazbek's Planet of Clay Magazine: Sarin'ny Fahirano | tantara foronina
The Delicacy by James Albon review - fanoharana momba ny trano fisakafoanana eran-tany maranitra | Sarimihetsika sy tantara an-tsary